Jereo Ny Nataon’ireo Toeram-pitrandrahana Harena ankibon’ny Tany Goavana Tamin’ireo Nosy Filipiana Efatra Mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2015 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Español, čeština , Français, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, македонски, Italiano, English
Renirano voaloton'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ao amin'ny nosy Rapu-Rapu. Sary avy amin'ny Kalikasan – Tambajotram-bahoaka ho an'ny Tontolo Iainana, fampiasàna nahazoana alàlana
Manana nosy maherin'ny 7.000 i Filipina. Mety efa mahazatra anareo ny sasany amin'izy ireny, toa an'i Boracay, Cebu, Bohol, ary Palawan, izay toerana malaza amin'ny resaka fizahantany daholo. Saingy mety tsy mbola nandre ny amin'i Marinduque, Rapu-Rapu, Manicani, Homonhon – nosy efatra izay nosimbàn'ny fitrandrahana harena ankibonìny tany tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Firenena manankarena amin'ny mineraly i Filipina, ary mba hanosehana ny toe-karena ao an-toerana dia tena navitrika tamin'ny fampiroboroboana ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ny governemanta. Tany amin'ny 2014, niisa 999 ny fahazoan-dàlana hitrandraka nanerana ny firenena navoakan'ny governemanta. Saingy manahy ireo mpiaro ny tontolo iainana momba ny fiantraikan'ireo fitrandrahana goavana ireo amin'ny firindran'ny tontolo iainana, raha ireo mpikatroka sasany mafàna fo kosa manakiana ny ampihimamban'ireo vahiny sy ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany.
Ny tantaran'i Marinduque, Rapu-Rapu, Manicani, ary Homonhon dia manasongadina ny sasany amin'ireo olana sosialy mifandray amin'ny indostrian'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany.
Fony nanomboka tao amin'ny nosy Rapu-Rapu ny hetsika asa fitrandrahana harena ankibon'ny tany, folo taona lasa izay, dia noderain'ny governemanta sy ny indostrian'ny fitrandrahana ho toy ny ohatra iray tsara amin'ny “fitrandrahana mandray andraikitra”. Nefa taona iray taty aorian'izay, voapoizin'ny cyanide ny faritra manodidina ilay toerana fitrandrahana, niteraka fahafatesana faobe ho an'ireo trondro sy nanimba ny antom-piveloman'ireo mpanjono. Rapu-Rapu dia nosy kely iray, fari-piadidina ao amn'ny faritr'i Bicol, any atsinanan'i Filipina.
Nampiresahan'ny tranonkalam-baovao Bulatlat i Antonio Casitas, tantsaha zokiolona, mpitarika sady mpikatroka mafàna fo mpiaro tontolo iainana, mikasika ny fiantraikan’ireo hetsika ataon'ilay orinasa Aostraliana mpitrandraka harena ankibon'ny tany, Lafayette, ao amin'ilay nosy :
Nosy nahafinaritra i Rapu-Rapu tany aloha tany, toy ny paradisa kely. Tsotra ny fiainanay tao — niaina niankina tamin'ny natiora izahay, ary notandremanay fatratra ny tsy hanimba azy io satria fantatray fa loharanon'ny fivelomana sy fitaovana ampiasainay izy io. Rehefa tonga ireo orinasa mpitrandraka, niova ny zavatra rehetra. Ankehitriny, 97 isanjato amin'ny nosy Rapu-Rapu no azo lazaina ho efa eo ambany fifehezan'ireny mpanimba tontolo iainana ireny, ary ary lasa toy ny fitoeram-pako ilay paradisa fahizay.
Hatramin'ny 1996, ilay nosy faritany ao Marinduque any amin'ny faritra afovoan'ny vondronosin'i Filipina, dia mitohy mizaka ny fanapoizinana vokatry ny fanariana ny loto avy amin'ny fitrandrahana, nateraky ny firodanan'ny tohodrano iray natao handraisana ireo loto avy ao amin'ny orinasa Marcopper. (Jereo ny lahatsary etsy ambony). Ny zavadoza ateraky ny Marcopper tamin'izany fotoana izany no zava-doza ratsy indrindra momba ny resaka fitrandrahana harena ankibon'ny tany teo amin'ny firenena. Joseph Israel Laban, mpamokatra sarimihetsika ary teraka avy ao amin'ilay nosy, dia nanoratra tao amin'ny Facebook fa hoe tsy vitan'ilay orinasa mpitrandraka ny namerina sy nanome hasina ireo vondrom-piarahamonina nidonan'ilay loza :
Taorian'ny 18 taona sy filoham-pirenena efatra, mbola mila diovina hatrany ilay renirano ary mila averin'ilay orinasa Kanadiana mpitrandraka harena ankibon'ny tany, Placer Dome/Barrick Gold, ho amin'ny laoniny. Ho ahy, hevitro manokana ity, folo minitra monja miala ny renirano Boac River aho no teraka sy nitombo. Izak'izay miampita an'io làlan-drano io aho hitsidika an'i Marinduque, dia tsaroako fa tena tsy misy mihitsy ny rariny ao Filipina. Tsy ho an'ny olona mahantra. Nefa ho anay Marinduqueños, tsy hanadino velively izahay.
Toeram-pitrandrahana manao tafo lanitra ao amin'ny nosy Manicani. Sary avy amin'ny Kalikasan – Tambajotram-bahoaka ho an'ny Tontolo Iainana, fampiasàna nahazoana alàlana
Ny dona nitera-pahavoazana avy amin'ny rivodoza Haiyan (nantsoina tany an-toerana hoe Yolanda) tamin'ny 2013 no zava-doza goavana indrindra tany Visayas Atsinanana. Saingy nisy ihany koa ireo zava-doza hafa ara-tontolo iainana tany amin'ny faritra, naterak'ireo asa fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Tao amin'ilay nosy kelin'i Manicani, notoherin'ny vahaka ny fiverenan'ny orinasa iray izay tena nanimba be tokoa ny loharanon-karena natoraly tao amin'ilay nosy ny zavatra nataony. Ny avy ao amin'ny Diosezin'ny Fiangonana Katolika ao Boronga no nitarika ny fanoherana, izay namoaka fanambaràna iray nanamafisany fa “tsy afaka ny hanampina maso sy hanentsina tadiny amin'ireo fanampàrana ataon'ny mpitrandraka izy, raha ny ny olona etsy ankilany mizaka ny vokatry ny asa tsy nataony akory.”
Toeram-pitrandrahana manao tafo lanitra ao Homonhon. Sary avy amin'ny Kalikasan – Tambajotram-bahoaka ho an'ny Tontolo Iainana, fampiasàna nahazoana alàlana
Nosy iray hafa ao Visayas Atsinanana izay mitolona ho tafarina amin'ny loto navelan'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany i Homonhon. Nanomboka tamin'ny 1983 ny asa fitrandrahana tao amin'ilay nosy ary namela fahapotehana mitaritarika ho an'ny tontolo ,izay nampivonto fo ireo mponina ka nahatonga azy hanohitra tamin'ny heriny rehetra ny fitàran'ny fitrandrahana ao amin'ilay nosy. Vavolombelona nahita maso io zava-misy teny an-toerana io ny tarika mpanangom-baovaon'ny Bulatlat :
Torapasika mahafinaritra no nitsena ny tarika, saingy arakaraky ny nandehanan'ireo mpanao gazety nanatona ny tendrombohitra, dia marika fahamaizana no hitan-dry zareo, lakandrano tsy misy rano intsony, tany ariana metatra vitsy monja eo akaikin'ireo lavaka lalina folo isak'ireo toeram-pitrandrahana tsirairay.
Nilaza tamin'ny Bulatlat ny mpitarika iray tao an-toerana fa “hanohy ny fanoheranay izahay mponina ary raha ilainay ny mametraka sakana mba hampiatoana ireny asa ireny, dia hataonay.”
Ny fahalotoan'ny tontolo iainana sy ny fahaverezan'ny antom-pivelomana ao Marinduque, Rapu-Rapu, Manicani, ary Homonhon dia tokony hampiasa saina lalina ireo mpitarika any amin'ireo nosy kely hafa momba ny firindran'ny tontolo iainany alohan'ny handraisany an-tànan-droa ny fidiran'ireo orinasa mpitrandraka goavana any amin'ny tany onenan-dry zareo.